China 5 in 1 type c hub usb c3.0 hub docking station usb-c hub mpanamboatra sy mpamatsy |Wellink
Modely : C-S002
1*Vehivavy Type-C (ho an'ny PD3.0 100W, W/data 5Gbps)
Ny seranana rehetra ilainao
Manohana famandrihana pass-through 60W (minus 15W ho an'ny fampandehanana) mba hahafahanao mampiakatra ny MacBook Pro 15” amin'ny hafainganam-pandeha feno—rehefa miditra amin'ny asa hafa an'ny hub.(Tsy tafiditra ny charger).
fahan'ny USB 3.1 Type- C lahy
Fivoahana 2 * USB3.0 A/F (5Gbps tahan'ny)
Output 2 1 * Type- C vavy (ho an'ny PD3.0 100W, W/ data 5Gbps)
Output 3 1 * RJ45 (100/1000Mbps)
ara-nofo Aluminum Alloy rehetra
Mahazoa seranana data USB-A 3, seranan-tsambo 1 USB-C Power Delivery, seranana data USB-C 1, seranana RJ45 1 — ao anaty habe iray izy rehetra
Fampisehoana mazava kristaly
Aza mandany fotoana mifamadika amin'ny programa na antontan-taratasy.Mifandraisa tsotra amin'ny fanaraha-maso ivelany amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo 4K HDMI mba hahazoana traikefa mora kokoa sy mamokatra kokoa.
Mafana be ve izany rehefa afaka 2-3 ora film na lalao?
mafana ny ahy rehefa afaka 15-20 min monja ny fampiasana ny HDMI.Aorian'izay dia manomboka mikitroka mandritra ny 2-3 segondra ny horonan-tsary, ary lasa tsy azo ampiasaina amin'ny horonan-tsary.Tsy manoro ity vokatra ity aho amin'ny famoahana horonan-tsary noho io antony io.Ny ampahany USB hub dia miasa tsara na dia mafana aza.
Ny port usb-c ve eto ho an'ny fiampangana fotsiny, sa afaka mampiasa fitaovana mifandray aminy amin'ny macbook pro-ko koa ve aho?
Eny, manana port usb-c ny hub izay afaka mandefa data. Manantena aho fa hanampy
Okay fa very hevitra aho, raha ny port usb rehetra no ampiasaina ao anatin'izany ny port usb c dia inona ny max amperage output isaky ny port?
Avy amin'ny famaritana ny vokatra: "Plug & Play with Integrated Charging: Ampiasaina tsy misy fiara ivelany na hery ilaina; ampiasaina amin'ny fitaovana azo entina toy ny fitendry tariby, USB flash drive, kapila ivelany 2.5mm sns. Afaka mamindra hatramin'ny 100W ny herin'ny USB Power Delivery Laptop, ary manome hery fanampiny ho an'ny kapila mafy, mpamily DVD ary kojakoja mifandray amin'ny seranana USB"
Hiasa amin'ny pc dell-ko sy ny afo mirehitra.?
Eny, tokony ho izany raha mbola manana seranan-tsambo USB-c amin'ny fitaovanao ianao.Miasa tsara amin'ny Dell xps 15 sy galaxy note 8
VL813：Hatramin'ny seranana U3 4 dia azo ampiasaina amin'ny HUB miaraka amin'ny interface USB3.0, ary ny tahan'ny USB3.1 GEN1 dia 5Gbps
teo aloha: 17 amin'ny 1 karazana c hub usb c 3.0 station usb-c hub docking station
Manaraka: 4 amin'ny 1 karazana c hub usb c 3.0 hub docking station USB-c hub